Qaar kamid ah gobolada Mareykanka oo soo rogay xayiraado Covid-19 dartiis
Qaar kamida gobolada Mareykanka oo soo rogay xayiraado Covid-19 dartiis
WASHINGTON, US - Iyadoo kiisaska guud ee cudurka covid19 ee Mareykanka ay kor u dhaafeen 11 milyan, ayaa qaar ka mid ah guddoomiyayaasha gobollada, waxay soo saareen awaamiiro cusub oo lagu xaddidaayo dadka si loo yareeyo faafitaanka coronavirus.
Diblumaasiyiin safmarka Covid-19 dartiisa uga baxaya Sacuudiga
Caalamka 06.07.2020. 06:50
Tani ayaa kusoo hagaageysa xilli xaaladaha cudurka ee waddankaas ay sii kordhayaan.
Tirada dadka uu Covid-19 ku dilay Mareykanka oo ku dhow 130,000
Caalamka 05.07.2020. 06:35
Mareykanka oo uga digay muwaadiniintiisa booqashada Jabuuti
Afrika 25.04.2020. 09:42
Trump oo baaq kasoo saarey dadka Covid-19 ugu dhimanaya Mareykanka
Caalamka 30.03.2020. 15:56